VALANJAVABOARIN’I TSIMBAZAZA : Nofoanana ny fanomezana ny fitantanana ho an’ny Groupe Axian – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:58
Nitondra fanazavana ny MESUPRES
Accueil/Politika/VALANJAVABOARIN’I TSIMBAZAZA : Nofoanana ny fanomezana ny fitantanana ho an’ny Groupe Axian
VALANJAVABOARIN’I TSIMBAZAZA : Nofoanana ny fanomezana ny fitantanana ho an’ny Groupe Axian
Raharaha mafana mbola mitana ny sain’ny maro mandrak’ankehitriny ny vaovao niely momba ny fitantanana ny valanjavaboaharin’i Tsimbazaza, izay voalaza fa nomena ny vondrona orinasa karana iray. Nifamahofaho tanteraka ny resaka. Omaly, taorian’ny fifampiresahana teo amin’ny Minisitera tomponandraikitra, sy ny Solontenan’ny mpiasan’ny Parc Tsimbazaza, ny Collège des chercheurs, dia tapaka fa hofoanana ny fanomezana ny fitantanana ity toerana ity ho an’ny Groupe Axian.
Tao anatin’ny fampitam-baovao voalohany navoakany ny Minisiteran’ny Fampiarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa dia mbola nanizingizina fa “Tsy marina velively ny filazana fa nafindra amin’ny vahiny na amin’ny Fondation Axian ny fitantanana ny PBZT”. Notsindrian’ity Minisitera ity, izay mpiahy ny Parc Tsimbazaza, fa nisy ny tolotra fiarahamiasa izay naroson’ny Fondation Axian. Ary toy ny tolotra rehetra dia manao ny fandraisana sy fandinihina ny andinindininy rehetra ny Mespures ary navondrona ny fanehoan-kevitry ny teknisianina mba ahafahana maneho hevitra manoloana ny tolotra satria mifantoka bebe kokoa amin’ny fanatsarana ny fitantanana no tanjona.
Na tiana na tsy tiana anefa, efa nisy ny taratasy laharana 2524/MESUPRES/MIN/SP navoakan’ity Minisitera tomponandraikitra ity ny datin’ny 09 Novambra 2021, sy ny taratasy laharana faha 23173221/MESUPRES/SG nivoaka ny datin’ny 11 Novambra 2021. Ireo taratasy roa ireo izay mahakasika indrindra ny volavolam-pamindram-pitantanana ny Parc Tsimbazaza, ho an’ny Groupe Axian. Omaly, nandritra ny fifampiresahana teo amin’ny Minisitera tomponandraikitra, sy ny Solontenan’ny mpiasan’ny Parc Tsimbazaza, ary ny Collège des chercheurs, dia tapaka fa hofoanana ny fanomezana ny fitantanana ity toerana ity ho an’ny Groupe Axian. Izany hoe, raha adika ity tsoa-kevitra nivoaka nandritra ny fifampiresahana teo amin’ny telo tonta ity, dia tsy mbola nisy akory ny fanapahan-kevitra raikitra mahakasika ny famindram-pitantanana ny Parc Tsimbazaza, fa mbola anaty fandinihana sy ny fakan-kevitra tanteraka ny Minisitera tomponandraikitra. Ka ity nofoanana ity, araka izay, dia mbola ilay volavolam-pamindram-pitantanana ihany.
Manome vola fampihodinana ny PBZT ny Fanjakana
Na izany aza, nazava ny tenin’ny Minisiteran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa omaly, raha nitondra fanazavana mahakasika ity resaka mifamahofaho manodidina ny Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) ity. Nambaran’izy ireo fa ny PBZT dia iray amin’ireo foibem-pikarohana sivy eo anivon’ny Mesupres. Araka izany, dia ny Fanjakana malagasy no mandoa ny karaman’ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpiasa rehetra ao amin’ny PBZT na dia mampidi-bola aza ny PBZT. Mbola ny Fitondram-panjakana ihany koa no mandefa ny vola fampihodinana ny PBZT. “Ny Mesupres dia mikaroka mandrakariva ny hampandroso ireo “organisms rattachés” sy hanatsarana ny fomba fiasa ary ny fitantanam-bolam-panjakana…Momba ny hoavin’ny fitantanana ny PBZT dia ao anatin’ny adihevitra tanteraka ny Mesupres izay mametraka mandrakariva ny maha zava-dehibe ny fikarohana sy ny fampianarana ambony ary manome lanja hatrany ny fiarahana miasa amin’ny mpiara-miombona antoka tsy ankanavaka”, hoy ny fampitam-baovao.
HERY RASOAMAROMAKA : « Mahazaka demokrasia ny Fitondrana ankehitriny… »
FAMOAHAM-BOLAM-PANJAKANA: Miato mandra-panendrena ny Tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana
RAHARAHA « EDDY BOIS DE ROSE » : Nohafahana ireo mpiasan’ny fahasalamana roa, nidoboka eny Antanimora ireo mpiandry fonja telo
“MPIANATRA IRAY, HAZO IRAY”: Hamafisina ny fanabeazana ara-tontolo iainana manomboka izao
ZAVAKANTO : Tokony hanaja hatrany ny Soatoavina malagasy ny hira